Iyangcwatshwa namhlanje ingane eyashona kunombhikisho eThekwini | News24
Iyangcwatshwa namhlanje ingane eyashona kunombhikisho eThekwini
Durban – Luzobekwa ekhaya lalo lokugcina usana obelunamasonto amabili luzelwe, uJayden Khoza, olwashona esigamekweni okusolakala ukuthi amaphoyisa ajikijela usisi olukhalisa unyembezi lwase luyahileka.
Lesi sigameko senzeke ngesikhathi kunombhikisho wezindlu owawusemijondolo yaseThekwini.
UKhoza uzongcwatshelwa emathuneni aseMolweni, eNanda, ngoMgqibelo.
Inkonzo yomngcwabo izokuba seForeman Road, eClare Estate‚ lapho abazali bale ngane behlala khona, kubika iSowetan.
Ngemuva kokushona kwale ngane, umama wayo wayephelezelwa ababhikishi ephethe isidumbu sosana lwakhe belibangise esiteshini samaphoyisa.
Okhulumela inhlangano Abahlali baseMjondolo uThapelo Mohapi wathi ngesikhathi kuqhubeka lo mbhikisho, amaphoyisa agasela kule mijondolo ashaya abantu ngamaqupha, iziqobolo aze adubula nangezinhlamvu zenjoloba.